ကုန်ကြမ်း Desoxymethyltestosterone အမှုန့် (3275-64-7) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / testosterone အမှုန့်စီးရီး / Desoxymethyltestosterone အမှုန့်
SKU: 3275-64-7. Categories: testosterone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Desoxymethyltestosterone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (3275-64-7) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Desoxymethyltestosterone အမှုန့် အားကစားသမားနှင့်ကာယဗလတစ်စွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်စျေးကွက်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးဒီဇိုင်နာ steroids တဦးဖြစ်ပါသည်, အဖြစ်ထက်ဝက်အဖြစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် DHT အဖြစ် ပတ်သက်. အန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) ကိုခညျြနှောငျတှေ့နှင့်17α၏ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးညွှန်းထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားအဖြစ် ventricular hypertrophy ကျန်ရစ်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအသည်းပျက်စီးမှုအဖြစ်, AAS -alkylated ။
Desoxymethyltestosterone အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Desoxymethyltestosterone အမှုန့် (DMT) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 144-146 ℃
အခြားအမည်များ: DMT, Pheraplex, DMT, Madol, Desoxymethyltestosterone / DMT, Madol အမှုန့်, Pheraplex အမှုန့်
Madol အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ LIFT အတွက်လျင်မြန်စွာအကျိုးအမြတ်ကိုမျှော်လင့်နဲ့ရေ retention ကိုမပါဘဲကြွက်သားထုထည်အကျိုးအမြတ်တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဟို steroids လိုပဲ, ကပရိုတိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်သွေးနီဆဲလ် (RBC) တွင်တိုးမြှင့်အတွက်အထောက်အကူ။
BALCO နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်တချို့ကအားကစားသမားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုနှင့်အတူကြွက်သားနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ဖို့, အခြားဒြပ်ပေါင်းများအပြင်, Desoxymethyltestosterone အမှုန့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ BALCO တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့အားကစားသမား (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် Madol သို့ပွေးလေ၏) MLB နှင့် NFL ကြယ်များဖြစ်ကြသည်: ဘယ်ရီဘွန်းဘီလ် Romanowski, Jason Giambi; အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောမာရီယန်ဂျုံးစ်အဖြစ်မြောက်မြားစွာအိုလံပစ်အားကစားသမား။
တစ်နေ့လျှင် 10-30mg ၏တစ်ဦးကသောက်သုံးသောလေးသို့ခွဲထွက်ခြင်းနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးထက်ပိုသမ္မာသတိရှိသောထိုးအချိန်ဇယားကိုတစ်နေ့လျှင်3(သုံး) ကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအစွမ်းထက်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူမလိုအပ်ပါသည်အတိုင်း, တစ်နေ့လျှင် 50mg ထက်မပိုပါစေနဲ့။ ဒါ့အပြင်သင်သံသရာအပေါ် 6-8 ရက်သတ္တပတ်ကျော်လွန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Desoxymethyltestosterone အမှုန့်အသုံးပြုသူများအသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအကဲဖြတ်ရန်, 15 ရက်သတ္တပတ်အများဆုံးအဘို့, တစ်နေ့လျှင် 4mg run သငျ့သညျ။
ဤသည် Desoxymethyltestosterone အမှုန့်နှင့် trenbolone အပေါ်အခြေခံပြီးရဲ့တစ်စပ်ပါးစပ်, ထိုးဆေးသံသရာဖြစ်ပါသည်:
အပတ်က Madol Trenbolone
ပျမ်းမျှ Cycle အလျား:
(+5မှ -5 ၏စကေးတွင်) ratings:
ကြွက်သား Gain: + 4
အစွမ်းသတ္တိကို Gain: + 3
အဆီ Gain (အနုတ်အဆီဆုံးရှုံးမှုဆိုတာကိုပြသ): + 1
ရေ retention: + 2
ကျူးကျော်: + 2
ဝက်ခြံ: + 1
ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု: + 1
ဆီးကျိတ်ချဲ့: + 1
အသည်းအဆိပ်: + 3
ဘယ်လို Desoxymethyltestosterone အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Desoxymethyltestosterone အမှုန့်အားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလတစ်စွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်စျေးကွက်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးဒီဇိုင်နာ steroids တဦးဖြစ်ပါသည်, အဖြစ်ထက်ဝက်အဖြစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် DHT အဖြစ် ပတ်သက်. အန်ဒရိုဂျင် receptor (AR) ကိုခညျြနှောငျတှေ့နှင့်ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးညွှန်းထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားအဖြစ် ventricular hypertrophy ကျန်ရစ်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောအသည်းပျက်စီးမှုအဖြစ်17α-alkylated AAS ၏။
လေ့လာရေးအန်ဒရိုဂျင်အဖြစ်သာ 160% ဖြစ်ခြင်းစဉ်က testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှု 60% ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဟို / အန်ဒရိုဂျင်အချိုး 1200 / 187 ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Madol လည်းအီစထိုဂျင်သို့ aromatize မထားဘူး။
အသုံးပြုသူများသည်သိသာထင်ရှားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတိုး, ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဖောင်းမျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ 20-4 ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအထက်သို့ 6lbs ၏အလေးချိန်အကျိုးအမြတ်ကဒီဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူများ၏ကြားဖူးနေကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါအထင်ရှားဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခိုင်မာတဲ့ကြွက်သားပန့်များ, အသက်ရှုမဝြခင်း, မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, အဆီပြန်အသားအရေနှင့်ဖောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများအသည်းသို့မဟုတ်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါ်အဆိပ်သက်ရောက်မှု minimize လုပ်ဖို့လိုခငျြလြှငျ, DMT တစ်လျောက်ပတ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် 10mg / နေ့အဖြစ်အနိမ့်ဆေးများမှာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီဒြပ်ပေါင်း methylated ကြောင်းဖြစ်ခြင်း, အခြား methyl ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူ stacked မရသင့်ပါတယ်။ အတန်အသင့်အနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုရှိခြင်း, DMT အဆိုးဟာလိင်စိတ်နှင့် erectile function ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ ဤသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး DHT အဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်း testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ယင်း၏ Non-aromatizing metabolites တဦးနှင့်အတူ DMT stacking အားဖြင့်ထေနိုငျသညျ။
သငျသညျကွညျ့ရှုဘယ်မှာပေါ် မူတည်. DMT methyltestosterone အဖြစ်အန်ဒရိုဂျင်အဖြစ် 2-12 ဆပိုမိုဟိုနှင့် 0.4-2 ကြိမ်ဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 2-androstenol တစ်ခုနီးပါးတူညီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, တစ်ဦးသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် pheromones ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DMT တစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ။ သို့သော်တစ်ဦး 17aa Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒြပ်ပြောင်းလဲနှင့်သဘာဝမဟုတ်စေသည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ယခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။
Desoxymethyltestosterone ကုန်ကြမ်း Powder
ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောဒီအဖြစ်အစွမ်းထက်ပါးစပ် Steroid တစ်မျိုးအစွမ်းထက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်မယ်လို့, ဤ DMT နှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါတယ်။ Madol အသည်းအားဖြင့်ပြိုပျက်ခံရခြင်းမှဝင်းကာကွယ်ပေးရန် 17alpha-alkylated ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေး (အထူးသလက်စထရောအဆင့်ကို) ဖြစ်ပေါ်လာအောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်သံသရာအတွင်းမှာသင့်ရဲ့အသည်းနှင့်နှလုံးကာကွယ်ပေးရန်ထိုကဲ့သို့သော N2Guard အဖြစ်သံသရာ-အကူအညီဖြည့်စွက် run အကြံပြုသည်။ လျင်မြန်သောရလဒ်များကိုလည်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အိပ်မပျော်ဆိုလိုနိုငျသညျ, ဒါကြောင့် 6-8 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကဒီဒြပ်ပေါင်းများကိုချွတ်သံသရာမှအလွန်အရေးပါသည်။ ထို့အပြင်, ဒီ Steroid တစ်မျိုးဖိနှိပ်ဖြစ်တယ်, ဒါတစ် post ကိုသံသရာကုထုံးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
AASraw ထံမှ Desoxymethyltestosterone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Desoxymethyltestosterone ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း